I-China Posture Corrector J15 Imveliso kunye neFektha | Hongzhu
Isixhobo I-Neoprene, iNaylon Neoprene
Uhlobo Ngentwasahlobo / ekwindla, ehlotyeni
Umsebenzi Ukuphefumla, ulungiso lomva
Isici Iyaphefumla, yomelele
Umbala Mnyama ngokwezifiso
Iimpawu Iimpawu ezenziwe ngokwezifiso
Iphakheji Ibhegi ephikisayo, ibhegi ye-zip, ibhokisi yemibala okanye ehlelelekileyo
Iibhrawuza zangasemva kufuneka zinxibe iiyure ezingama-3-4 ngemini. Imizuzu engama-15-25 nje, emva koko dibanisa imizuzu engama-20 ngosuku. Umva wakho kunye namagxa uya kuhlengahlengisa ngokuthe chu, kwaye uya kwakha inkumbulo yemisipha yokuma ngendlela efanelekileyo. Kulumkele ukuqinisa kakhulu ukuphepha ukungxinana okugqithisileyo. Akusoloko kuluvo olulungileyo ukunxiba isikhundla senkxaso ixesha elide. Ingasetyenziswa kuphela njengesixhobo soqeqesho sokukunceda uphinde ubuye ngokuma kwakho okuqhelekileyo. Ii-posture straighteners azenzelwanga ukuba zinxitywe, ke zona zenzakalisa kakhulu kunokuba zintle. Inkxaso ye-back back ene-lumbar pads inceda ukubonelela ngesiqabu ekulimaleni nasekuqhubeni uqhubeke. Kuyacetyiswa ukuba kuncedwe ukunciphisa intlungu yoxinzelelo lwasemva, ispres kunye nemisipha yemisipha. Olu hlengahlengiso lomtshato luyindawo yeyona ndlela ineendleko zokuthintela ukulala kunye nentlungu engapheliyo enxulumene nayo. Imitya kunye nemitya imo ehlengahlengiswayo ngokupheleleyo, ikunika ukuchaneka komzimba ofanelekileyo wentuthuzelo yakho, ekucetyiswa ukuba uyinxibe engaphantsi. Siqinisekile ukuba uza kuyithanda le mveliso kwaye ndiyathemba ukuba uza kuyifumana kwakamsinya, awoneliseki yiyo okanye iimpahla zekotoni.
Edlulileyo: Isilumkiso sokudibanisa J12
Okulandelayo: Isilumkiso seSmart smart
Isilumkiso sokubuyela ngasemva kwi-Brace
Ukulungisa imeko yangasemva
Ukulungisa umzimba ukuze ulungiswe
Isixhobo sokuLungisa seSithuba
Ukulungisa isimo sasemva kwabantwana
Ukulungisa isimo sasemva kwabasetyhini